> Resource > Mac > Ezvid u Mac: Samee duubey oo Home Videos Si fudud ee Mac OS
Ezvid waa video gaare fudud oo degdeg ah u isticmaala Windows si ay u abuuraan oo share videos si toos ah u YouTube. Waxaa loo labada xirfadeed iyo hiwaayadda isticmaala, waxay kaa caawin karaan inaad la abuuro duubey cajiib ah oo filimada guriga ku daqiiqo halkii saac. Haddii aad loo isticmaalo in lagu Ezvid, oo kaliya u dhaqaaqay Mac ah, waxaad la Yaabteen kara haddii Ezvid sidoo kale yimaado version Mac ah. Nasiib darro, Ezvid ma taageeri Mac oo ay sabab u tahay in aad leedahay si aad u hesho barnaamijka video in ay la mid tahay Ezivd ah. Haddii tani ay tahay kiiska, siin Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ee Mac isku day ah. Waxaa u shaqayn karaa sida Ezivd mid awood leh Mac by users da'da ah oo dhan. Hubi tutorial video ku saabsan sida loo edit videos on Mac hore oo kale.
1 interface dareen leh oo sax ah video tafatirka
Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ee Mac qoreysa interface horyalka Talyaaniga iyo qalabka tafatirka anfacaya. Waxay bixisaa browser warbaahinta si aad u dajiyaan oo dhan, gudaha video, audio ama weli images ku haboon. Oo keliya ayaa soo jiitaa-iyo-dhibic, waxaad qabanqaabin kartaa oo abaabulo videos for fudud tafatirka. Dhammaan video tafatir ku salaysan yahay Timeline, taas oo kuu ogolaanaysaa inaad xaalkaa audio video & ay si raaxo leh. Sidoo kale, waxa uu siiyaa dhinac-ilaa-dhinac previewing uu furmo suuqa. Wixii aad aragtid waa waxa lagu siiyo.
2 In kor loo qaado si aad video dhakhso ee Mac
Ka sokow dhammaan qalabka tafatirka guud sida dalagga, isku shaandheyn, jar, kala, ku dar voiceover iyo music soo jeeda, Ezivd u Mac sidoo kale aad u saamaxaaya in ay taabtaan ilaa videos liiska dheer ee heer video itusi. Tusaale ahaan, waxaad codsan kartaa Muuse si ay u qariyaan qarin shakhsi ama xuquuqdiisa info, la abuuro dhow-u istaagaan oo ka soo baxay dadkii badnaa, qabsato xawaaraha ciyaartoyda sida 2x dhakhso si ay u sameeyaan wax xiiso leh. Iska daaya gaaray saamaynta aad jeceshahay ka kala guurka hodan, filtarrada muuqaal, intros / credits, qoraalka, dhawaaqa iyo in ka badan.
3 Share kaalinta video leh dunida oo dhan ka
Marka aad dhamaysato video tafatirka, waxaa jira noocyo kala duwan oo ka mid ah fursadaha ay heli karaan dhoofin abuurkiinna. Sida Ezvid, si fudud toos ah aad gali kartaa adiga oo masterpiece in YouTube tan kale Ezvid, iyo sidoo kale fariin u Facebook iyo Twitter. Ama badbaadin on computer dhammaan qaabab SD iyo HD sida AVI, wmv, MOV, MKV, iyo wixii la mid ah. Inta badan, waxaad dooran doonaa inuu u ciyaaro ee qalabka la qaadi karo sida iPad, iPhone, Samsung Galaxy SIII, iwm Xitaa gubanaya DVD ama DVD fayl ku jira software this ilaalinta joogtada ah.